सुगौली सन्धिपछिको ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नेपालमै रहेको स्पष्ट, काली नदी सीमाना – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By डिजिटल खबर Last updated May 17, 202030
२ जेठ, काठमाडौँ । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा मुहान भई बगेको काली नदीलाई सीमा स्वीकारे पनि नेपालको नक्सामा किन त्यो समेटिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नेपालमै रहेको स्पष्ट देखाइएको छ । यद्यपि २०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा किन समेटिएन ? नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नक्सा तयार पार्ने क्रममा कालापानी क्षेत्रको सीमामा द्विविधा देखियो । लिपुलेक र कालापानी मात्र राख्ने कि लिम्पियाधुरासमेत नक्सामा समेट्ने ?
त्यस्तै सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सर्भे कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीलाई ‘काली आर’ भनिएको छ । विज्ञ भण्डारीका अनुसार सन् १८२६ मा क्याप्टेन जेडी हेर्वर्टले तयार पारेको नक्सामा समेत महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको छ ।
स्तै सीमाविद् श्रेष्ठले लन्डनस्थित ब्रिटिस पुस्तकालयबाट सङ्कलन गर्नुभएको कुमाउँ, गढवालको विवरण सहितको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली आर’ उल्लेख गरिएको छ । यो नक्सा ब्रिटिस संसद्द्वारा पारित ऐन अनुसार सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले आफ्नै हाइड्रोग्राफरद्वारा तयार पार्न लगाएको जानकारी सीमाविद् श्रेष्ठले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सुगौली सन्धि भएको ४० वर्षपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको सर्भेयर जनरल अफिसबाट सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा समेत लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘काली आर’ भनिएको छ । जङ्गबहादुर राणाको हाते नक्साको विवरण सङ्कलन गरी यो नक्सा तयार पारिएको जनाइएको छ । यो दुवै देशका सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणित नक्सासमेत हो ।
०३० सालमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिमा उल्लेख कालापानी कुन हो ? र कहाँसम्म नेपालको सीमा पर्छ भन्ने विषयमा एउटा अध्ययनसमेत गरेको थियो । सन् १९३१ मा प्रकाशित नक्सासहित स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीलाई भारतीय सेनाले ‘तथाकथित कालापानी’बाट अगाडि बढ्न नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय सेनाको चेकपोस्टका अफिसर राजेन्द्रप्रसाद सिंहले नजिकैको सानो खोल्सोलाई ‘काली नदी यही हो’ भनेर जानकारी दिएको गृह र परराष्ट्रको २०३० सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा भारतीय सेना बसेको स्थान नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
BritishDigital KhabarKalapaniLipulekhMapMap of NepalOld MapReal Nepal